#Solskjaer oo ku adkeysanaya in ciyaartoy badan ay heystaan 'Man Utd DNA' Inkasto uu Isbedel ku taliyey - Get Latest News From Horn of Africa
#Solskjaer oo ku adkeysanaya in ciyaartoy badan ay heystaan ‘Man Utd DNA’ Inkasto uu Isbedel ku taliyey
Ciyaaryahanka kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa sheegay in ciyaartoyda Red Devils aysan ixtiraamin kooxda ama taageerayaashooda, kaddib guuldaradii 4-0 ahayd ay kala kulmeen Everton Axadii lasoo dhaafay.
Laacibka reer France ee Paul Pogba ayaa wareysi uu la yeeshay shabakada caanka ah “Sky Sports” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Tababaraha iyo shaqaalaha waxay ku hadleen qolka labiska, waxa ay ka hadleen waxay ahaayeen wax xaqiiqo ah, waxay inoo sheegeen in wixii ka dhacay kulankii Everton ay ixtiraam daro ku tahay nafteena”.
“Waxaa jiray waxyaabo badan ee ixtiraam la’aan ah oo ay u qabeen asxaabteena, shaqaalaha farsamada, dadka, iyo qof walba, Waxay noloshooda ku bixiyeen kooxda”.
“Ma aanan ugu jawaabin farxad, marka loo fiiriyo qaab ciyareedkii aan ku bixinay ciyaarta, sidaasi darteed waxaan u caroonay nafteena, waxaan hubaa inaan dooneyno inaan wax badan sameyno, waana sameyn karnaa, waxaa waajib ah inaan jawaab cad ka bixino wixii dhacay”.
“Waxa dhacay ma ahayn wax fiican, guuldarada waa wax xun, mana dooneyno inay sidaas dhacdo marka aan tartan ugu jirno inaan gaarno afarta kooxood ee ugu sareysa”.
“Ulama jeedo inaan ixtitaam daro u muujinayo ama aan hoos u dhigayo kooxda Everton, balse qaabkii aan u ciyaarnay, waxay ahayd mid ixtiraam darro ah, ma aanan ixtiraameynin nafteena, kooxdeena ama taageerayaasha”.
“Ma doonayo inaan ku dhaawaco qof walba erayadeyda, lakiin luqada ciyaartoyda garoonka dhexdiisa ma fiicna, ciyaaryahanka waa inuu ku bixiyaa wax walba gudaha garoonka, sababtoo ah wuxuu ku bixiyaa noloshiisa oo dhan gudaha garoonka”.